एसइई र प्लस टु दिएर बसेका विद्यार्थीको लागि विशेष तालिम दिदै अलाइन्स, उत्कृष्टलाई जवको ग्यारेन्टी !
March 31, 2019 April 1, 2019 अखवार अनलाइनLeaveaComment on एसइई र प्लस टु दिएर बसेका विद्यार्थीको लागि विशेष तालिम दिदै अलाइन्स, उत्कृष्टलाई जवको ग्यारेन्टी !
आइफोन म्याक, अल ब्राण्ड ल्यापटप टिभी (LCD /LED) को जुनसुकै समस्याको समाधान
एलाइन्सले ल्यापटप, कम्प्युटर, मोबाईल, प्रोजेक्टर लगायतका सामाग्रीको चिप लेबल ट्रेनिङमा रोजगारीसहित एकवर्षको प्याकेज सञ्चालन गरेको छ । आफैं स्वरोजगार बन्न चाहने युवा९युवतीलाई रोजगारीको ज्ञारेन्टी दिंदै आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गर्दै आएको छ । विभिन्न देशमा आफुले १० वर्ष सम्म हाँसिल गरेको अनुभवबाट तालिम सञ्चालन गरि नेपालमा धेरै यूवालाई रोजगार दिलाईसकेको कम्पनीको भनाई छ । सर्किट लेवल , चिपलेवल सम्बन्धि समस्याको तुरुन्त समस्या पत्ता लगाउने र यो सम्बन्धि तालिम दिइ आत्मनिर्भर बन्न सक्ने र विदेशमा पनि जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि काम गर्न सक्ने गरी जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ । तालिम लिएको एक वर्षमै युवाहरुले राम्रो आम्दानी हुने गरि काम गर्न सक्ने बनाउने कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक दिपक पोखरेल बनाउछन् ।
एलाइन्स् नेपालको सम्बन्धमा हरेक टेष्टिङ प्रविधिबाट द्धारा तालिम दिने एकमात्र तालिम सेन्टर हो । यस सेन्टरमा तालिम सिक्ने विद्यार्थी विदेशका जुनसुकै कुनामा गएर पनि काम गरि आफुलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने भएकाले युवा-युवतीको पहिलो रोजाइ बन्दै गएको छ एलाइन्स । विदेशमा जाने युवालाई लक्षित गरेर स्पेशल कोर्स सञ्चालन गर्ने गरिएको समेत दिपक पोखरेल बताउछन् ।
के छन् त् एलाइन्सका बिशेषता रु १। हरेक टेष्टिङ प्रविधिबाट तालमि गराउने । तालिमपश्चात् रोजगारीको ज्ञारेन्टी दिने । २।कसैले आफ्नै पसल अथवा मर्मत, तालिम सेन्टर जस्ता व्यवसाय गर्न चाहेमा पूर्ण सहयोग गर्ने । ३।विदेश जान चाहनेलाई विशेष कोर्स । विश्वका जुनसुकै कुनामा भएपनि अनलाइनबाटै सपोर्ट गरिने ४। अन्तराष्ट्रिय स्तरको ल्याव , पढाउदा हरेक मोडलको मदरबोर्ड, सर्किट र रियल प्रब्लममा आधारित रहेर पढाइने । ५। विद्यार्थी दक्ष नबनुञ्जेल अतिरिक्त शुल्क नलिइने ६। किताब लेखक तथा यस क्षेत्रका दक्ष प्राविधिकबाट समेत तालिम गराइने । ७।सिटिइभिटीबाट मान्यता प्राप्त ८।आइएसओ २००९ र २०१५ बाट प्रमाणित
सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने अलाइन्सको कार्यालय पुतली सडकमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । जाहाको टेलिफोन ०१४१६८२११, ९८४१०३०८२४